Kooxo hubeysan oo dilay Boqoraddii Quruxda waddanka Ciraaq ee Tara Fares
Mogadishu - 17:38:42
Thursday September 27, 2018 - 23:00:02 in Wararka by Super Admin
Wasiirka Arrimaha gudaha Ciraaq, Qasim Al-Araji ayaa xaqiijiyay in kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen gabar dalkaasi si aad ah looga yaqaanno oo lagu magacaabi jiray Tara Fares, taasoo ku caan baxday dhinaca labiska, horeyna ugu guuleysatay boqoradda quruxda Ciraaq, waxaana dhacdadani ka dhacday Baghdad.
Qaasim Cabdul Hadi oo ah madaxa Isbitaalka Rusafa Health Center ayaa warbaahinta u sheegay in Tara Fares meydkeeda la keenay Isbitaalka Sheikh Zaid iyadoo rasaas kaga taallay Madaxa iyo Feeraha.
Gabadhan oo 22 jir ahayd ayaa sanadkii 2015 ku guuleysatay boqoradda quruxda Ciraaq, waxaana ay ku noolayd caasimadda Kurdistan ee Erbil, hase yeeshee waxay mar walba imaan jirtay caasimadda Baghdad.
Waxay mar ku noolayd Qaaradda Yurub, hase yeeshee waxa ay go’aansatay inay ku laabato dalkeeda, waxaana ay shacbiyad ballaaran ku lahayd baraha bulshada, gaar ahaan Instagram oo ay soo dhigi jirtay sawirradeeda gaarka ah.
Fares waxay Instagram ku lahayd 2.6 Milyan oo taageere kuwaasoo si aad ah ula socday sawirradeeda, laakiin dadka reer Ciraaq ayaa ku kala qaybsanaa fikirka ay ka qabaan gabadhan ay iska dhaleen Aabe Ciraaqi ah iyo Hooyo Lubnaan u dhalatay, iyagoo sheegay in ay Baraha bulshada ku haysay dhaqan fool xun oo ka duwan midka reer Ciraaq, halka taageerayasheeduna ay fikir taa ka duwan qabeen.
Dhaqaatiirta caalamka oo la yaaban sababta Feyruska Cor … 15/03/2020 - 22:41:20